Izindlela ukuhlobisa isithombe sakho, kunezindlela eziningi. Manicure - lokhu ingenye izici eziningi zasendulo. Ngosizo okuyinto nje cha enza it manje! Ngaphezu kwalokho, ngisho noma ngokwemvelo une izipikili amahle eqinile, ungakwazi ukwakha kubo. Yini? Gel, acrylic, bio-ijeli - konke esandleni sakho. Uke uzwe yini kukhulunywa a ukuvenisha gel? Kukhona umbuzo ezinengqondo mayelana nomehluko phakathi ijeli kusukela ukuvenisha gel.
Okokuqala, lezi zinto ezimbili - umsebenzi bahluke. Ijeli ukhonza njengomdala zokwakha ukuze nail. Gel sula kuyadingeka ukudala manicure obuhlala njalo, futhi akukho okunye. Okwesibili, ijeli esikhulu zemvelo nail, kuqinisa ke. Gel sula futhi kukunika umbala, kodwa akusho ukwelapha futhi akusho ukuqinisa nail.
Yini ehlukanisa ijeli kusukela ukuvenisha gel okwamanje? Iqiniso lokuthi banayo isakhiwo ehluke ngokuphelele. Naphezu kweqiniso lokuthi lezi zinto zivaliwe ngokulinganayo - ekukhanyeni isibani UV. Ubude kwezobuchwepheshe - futhi lapho, futhi lisebenzisa isisekelo futhi hardener. Umahluko owokuthi ukuthi ngesisekelo ukuvenisha gel kudingeka bavikele umbala kwemvelo ipuleti, okungase ugxile. Fixer (aka ijeli sekugcineni) kuyadingeka ukuvikela nail futhi nail ngokumelene chips nokuklwebheka ukunikeza bukhanye.
Yini ehlukanisa gel kusuka isimiso gel ukuvenisha? indlela Isicelo. Gel lacquer sisetshenziswa ngendlela efanayo njengoba ezivamile nail lacquer - ibhulashi ibhodlela. Material ngoba amandla efanayo abeke ibhulashi ekhethekile. Kulokhu, uma jacket umuntu akuqondile, bese usebenzisa i-emabhulashini ambalwa.
Iyiphi indlela engcono kakhulu gel-sula? Phakathi kwazo zonke izinga ehlukile ekhona kanye ukumelana indaba ka inkampani American CND - Shellac. Wabonakala ngomunye wabokuqala. Okwamanje nguyena ezinzile kakhulu futhi kulula ukusebenzisa, ine impahla esihle. Umugqa izici imibala emashumini amane ukuze ivumelane zonke ukunambitheka kanye zonke izimo. Imbangi kuyinto ijeli nail "Gelish". umugqa wakhe has imibala ngaphezulu kusho izinga kubuye kakhulu, eliphezulu kakhulu. It akanawo kakhulu bafake ukumelana. "Shilak" - gel lacquer, okuyinto unqobile izinhliziyo emhlabeni wonke enikeza manicure ukumelana enhle ehlala amasonto amabili. Pedicure Ungase futhi ubambe nenyanga.
Yini ehlukanisa ijeli kusukela ukuvenisha gel okwamanje? Kuleso phambi lokunameka izinzipho zakamuva siqu angadingi ukucutshungulwa eqinile, ikakhulukazi - zapilivanija zemvelo nail ebusweni. Kuyinto plus elingenakuphikwa, ngenxa yokuthi lingazange liligcine ukulimaza plate.
Ijeli futhi kudinga ukulungiselelwa ngokucophelela nail zemvelo. Uma inkosi iza neziqu okusezingeni eliphezulu futhi, kungashiwo sina kulimaze izinzipho zakho. Futhi, omunye umehluko yindlela ukususwa impahla. Ijeli kungenziwa kuphela bagawula. Ayikho imali ngeke kusize ukwenza kube soft. Gel sula isuswe uketshezi ekhethekile, okuyinto kunoma yiliphi esitolo yezimonyo. Akudingi sawing! Ngakho, awusebenzi ona nail ekhaya.
Asinakusho ukuthi bakhethe phakathi izinto ezimbili bahluke oluyinhlanganisela. Konke kuncike kulokho mgomo ohlose ukufunda ngayo. Uma lena manicure eside, le sula gel nail ukukusiza. Uma izinzipho siqu kakhulu, esifushane kakhulu, futhi ngifuna eside, ijeli uhlale at service yakho!
Bird ngezandla zakho aphume iphepha, aphume amabhodlela